सामुदायिक वनको करिब ४ बिघा जग्गा अतिक्रमण गर्न खोज्ने मारूती सिमेन्टका दुईजना पक्राउ ! - PUBLIC AAWAJ-पब्लिक आवाज
सामुदायिक वनको करिब ४ बिघा जग्गा अतिक्रमण गर्न खोज्ने मारूती सिमेन्टका दुईजना पक्राउ !
प्रकाशित : आइतबार, असार १५, २०७६१०:०७ पब्लिक आवाज /संवाददाता
आलोक यादव ,सिरहा, असार -१५ गते । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत जिल्ला सिरहाको चोहर्बामा सञ्चालित मारुती सिमेन्टले सामुदायिक वनको करिब ४ बिघा जग्गा अतिक्रमण गरेको रहस्य खुल्न आएको छ ।
यसभन्दा अघि ०७५ साल असोजमा सोही वन उपभोक्ता समूह मातहतमा रहेको कुल ३१ हेक्टर जग्गामध्ये केही मारुती सिमेन्टले कब्जा गर्न खोजेको थियो ।
तर, अहिले फेरि मारुती सिमेन्टले वनको जग्गा अतिक्रमण गर्न सुरु गरेको बताइएको छ । नापी विभागले उक्त वन समूहलाई विस २०२२ सालमा बुट्यान वन क्षेत्र भनेर उल्लेख गरेको थियो ।
त्यसैगरी बन फडानीको काममा रहेका दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा भारत कोलकाताका विश्वजित नस्कर र आलोक अधिकारी रहेका छन् । उनीहरुलाई अहिले सिरहा वन कार्यालयको हिरासतमा राखिएको बताइएको छ ।
असार १ गते जोवाहा प्राकृतिक सामुदायिक वन परिसरमा हुर्कंदै गरेका विरुवामा क्षति पुर्याएको भन्दै नस्कर र अधिकारीलाई स्थानीयको सहायतामा पक्राउ गरिएको थियो।
मारुती सिमेन्टले सामुदायिक वनको करिब ४ बिघा जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेर अतिक्रमण गर्न निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ ।
यसपटक पनि जग्गा कब्जामा गर्न मारुति सिमेन्ट प्राविधिकको साथमा माटो टेस्ट गर्नका लागि मेसिनसहित त्यहाँ पुगेको थियो ।
मेसिनसहित उत्खन्न गरिरहेको अवस्थामा स्थानीयवासिन्दाहरुले रोकेरे उनीहरु सवार गाडिसहित मेसिन पनि नियन्त्रणमा लिए।
मारुती सिमेन्टको स्वाइल टेष्ट गर्ने मेसिन, बा १६ च २५८१ नम्बरको बोलेरो, परपसन मेसिन १ थान, टाइपट पाइप ३ फिटको ६ थान, २ फिटको एक थान, कोसिंग पाइप ४ थान, हमर सेट, बेलर चिजेल १ सेट, पाइप रिन्च २ सेट, ड्रम १ सेट, रिन्चको भाँडो १ सेटसहित सामानहरु स्थानीयले बरामद गरेको खुल्न आएको छ।
गत वर्ष वडा अध्यक्ष राम पुकार कामती, स्थानीय, वन कर्मचारीको उपस्थितमा मारुती सिमेन्टका तर्फबाट मनोज श्रेष्ठसँग छलफल भएको थियो ।
छलफलमा कारखानाले लेटर प्याडमा त्यहाँ वरपर रहेको वनको जग्गा तत्काल अतिक्रमण नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता भएको थियो ।
तर, उक्त सम्झौता गरेको एक वर्ष नबित्दै फेरी मारुती सिमेन्टले सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गर्न सुरु गरेको छ ।
यसरी सामुदायिक वनको जग्गा अतक्रमण गर्ने मारुती सिनेन्टलाई कारबाही गर्नुको साटो पक्राउ परेका दुई वन फडानीकर्तालाई छुटाउन सम्वन्धित निकाय नै लागि परेको भन्दै स्थानीयवासीहरू आक्रामक बनेका छन् ।
सिरहाका जिल्ला वन अधिकृत दासले भने पक्राउ परेकालाई छुटाउन आफूमाथि कुनै दबाद नआएको बताए।
उनले भने-‘म माथि कुनै दबाब आएको छैन । म वनको ऐन नियम र कानुन अनुसार आफ्नो काम गर्छु । कसैको दबाबमा म काम गरेको छैन ।’
बन अधिकृत दासले यस विषयमा के कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने अनुसन्धान जारी रहेकाले अहिले नै भन्न नसकिने बताए ।
त्यस्तै सिरहाका जिल्ला वन कर्मचारी अमरेन्द्र यादवका अनुसार रोडको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको उक्त १८ हेक्टर जग्गामध्ये केही जग्गा सुकुम्वासीका नाम थियो ।
सुकुम्वासीको नाममा रहेको सो जग्गा सुकुम्वासी आयोगमा दर्ता छ । तर, मारुती सिमेन्टले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर अतिक्रमण गर्दै आएको हो ।
जसलाई स्थानीयले अस्वीकार गरेका छन् । यसैबीच सिरहाका जिल्ला प्रशासन प्रमुख (सिडियो) गोपाल अधिकारीले भने सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको हो भने छानबिन हुने बताए ।
‘यदि जग्गा अक्रिमण भएको छ भने उक्त जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइन्छ ।’ उनले भने, ‘आज नापी पठाएको छु । सिरहा नापी कार्यालयबाट नापी अधिकृतसहितको टोली त्यसतर्फ जानुभएको छ । उहाँहरुले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेपछि अगाडीको प्रतिक्रिया बढाइन्छ ।’
नापी टोलीले ल्याएको निष्कर्ष अनुसार सम्बन्धीत सबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरिने उनले बताए । साथै सम्बन्धित पक्षहरुसँग भएको आधार प्रमाणहरु लिने र जग्गा अतिक्रमण भएको छ भने कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने उनले बताए ।
स्थानीयले भने सिमेन्ट उद्योगको भनेर लालपुर्जा देखाउँदैमा पत्याउने कुरा हुँदैन । ‘यो जग्गा वनको हो । तर, अहिले कसैले सिमेन्ट उद्योगको भनेर लालपुर्जा देखाउँदैमा पत्याउने कुरा हुँदैन ।’
एक स्थानीयले भने, ‘ठूलो किर्ते गरेर जग्गाको कागज बनाएको हुनसक्छ र अहिले फिल्डमा पनि अतिक्रमण गर्न खोजि रहेको छ, यसमा हामी सजग हुनैपर्छ ।
नदीमा बाढी आएपछी ज्यान जाेगाउन पुजारी चार घण्टादेखि रूखमाथि, उद्धार गर्न हेलिकप्टर मगाइयाे
ग्यास सिलिण्डर पड्केर ७ जना घाइते, २ कि अवस्था गम्भीर !